Zavatra 8 tokony hatao rehefa tsy mahita olona be dia be ianao - Fifandraisana
Zavatra 8 tokony hatao rehefa tsy mahita olona be dia be ianao
Na fisarahana na famoizana alahelo dia samy niaina ny hamafin'ny alahelo ny tsirairay.
Ary maro amintsika koa no tao anatin'ny toe-javatra izay tsy ahitantsika ireo olon-tiana malalantsika mandritra ny fotoana maharitra.
Malahelo olona be loatra ka mandratra ara-batana tena izy , ary mety hahagaga.
Afaka mandray an-tànana haingana ireo lafiny hafa amin'ny fiainanao koa izy io ary mety hahatsapa ho tsy manam-petra.
Noho izany dia nametraka torolàlana momba ny fomba hiatrehana io fahatsapana io izahay, ary ny zavatra azonao atao hanamorana izany.
1. Miresaka momba izany.
Ny olana zaraina dia olana antsasany.
Miresaha amin'ny olona tianao sy atokisanao momba ny zavatra tsapanao. Ho eo izy ireo hanohana anao, ary mety hanana mekanisma fandaminana mihitsy aza izay niasa ho azy ireo taloha izay azon'izy ireo zaraina aminao.
Ho tsapanao fa nesorina ny lanjany… matokia anay.
2. Mitenena amin'ny fomba mahazatra sy tsy tapaka.
Raha tsy mahita olona iray ianao izay mbola mifanaraka tsara aminao (mifanohitra amin'ny sakaiza taloha / mpiara-miasa na very olon-tiana) dia manorata fandaharam-potoana mandritra ny fotoana sasany - ara-bakiteny, FaceTime.
Azo antoka, tsy mitovy izy io, fantatsika, fa mahasolo tsara toa antsika io.
Maninona raha mametraka fanairana amin'ny telefaoninao mba hanananao horonantsary isan-kerinandro, na handamina fanadinana isam-bolana miaraka amina vondron'olona tsy hitanao?
Ny fanaovana ny fihaonana virtoaly ataonao ho zavatra mahazatra dia tena hanampy - ho tsapanao fa manao ezaka izy ireo, toy ny misy ambaratongam-panoloran-tena, ary toa mbola lafiny iray manan-danja amin'ny fiainany ianao.
Ny ampahany amin'ny hamafin'ilay olona very matetika dia avy amin'ny tahotra sao manadino antsika izy ireo, na mahatsapa fa afaka miaina tsy misy antsika izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fandaharam-potoana hifankahitana dia hahatsapa ho voaro kokoa ianao amin'ny fisakaizanao na ny fifandraisanao, ary hanana zavatra andrasana ianao!
3. Alefaso ny olana, aza sorohina.
Raha safidy ho anao io dia mitenena amin'ilay olona tsy hitanao.
Raha finamanana efa nifarana ary tena tsy tadiavinao izany dia miresaka amin'ilay olona voarohirohy hafa. Raha nifindra toerana hiasa ilay namanao dia resaho aminy ny fihetseham-ponao.
Tsarovy fa ny fahatsapanao dia mitombina ary, na manao ahoana na manao ahoana fahatakarana sy fanohanananao dia manan-jo haneho izany fahatsapana izany koa ianao.
Raha olona tsy misy finamanana na fifandraisana akaiky aminao intsony ity dia mandefasa lahatsoratra manontany raha afaka miresaka amin'izy ireo ianao satria hitanao fa sarotra ny mandroso.
Hiresaka bebe kokoa an'io izahay ao amin'ny faritra 'Get closure', fa ny fanapoahana baomba olona lava be sy antso an-tariby tsy hita isa dia tsy salama ary tsy ara-drariny, na eo aza ny fikasana tsara.
Raha amin'ny namana, olona ao amin'ny fianakaviana, na mpiara-miasa izany dia mila milaza ny marina amin'ny fahatsapanao ianao.
Ohatra, raha nifindra tany ivelany ny sipanao mba hanana asa 6 volana dia tsy maninona ny milaza aminy fa malahelo azy ianao!
Afaka ny ho mpiara-miasa mpanampy sy mpanampy indrindra ianao ary Na izany aza malahelo - tsy mahatonga anao sahirana na clingy fa mahatonga anao ho olombelona.
Avy any, azonao atao ny mifanakalo hevitra momba ny safidy mandroso - angamba azonao atao ny mizaha azy ireo amin'ity volana ity ary afaka mitsidika ny volana manaraka izy ireo angamba manaiky ny FaceTime indray mandeha isan-kerinandro ianao angamba mety hanoro hevitra azy ireo mihitsy aza fa hiala maraina ary hiverina any aminao.
Na iza na iza tadiavinao dia lazao azy ireo ny zavatra tsapanao - mety ho toy izany koa no tsapany. Na ny fahalalana fotsiny izany dia hanampy betsaka!
4. Ampiharo ny fahatsiarovan-tena.
Rehefa mampalahelo olona iray isika, na velona izy na maty, dia mahatsapa fihetseham-po mahery vaika tokoa isika - matetika ny hatezerana, ny fahatsapana ho meloka, ny nenina, ny alahelo.
Ireo fahatsapana ireo dia afaka manangona haingana sy mihidina amin'ny lafin-javatra hafa amin'ny fiainantsika.
Mahita ny tenantsika ho sosotra amin'ireo olona izay tsy voarohirohy amin'ny toe-javatra akory isika, na latsa-dranomaso tampoka teo amin'ny latabatray.
Ny tsy fahitana olona loatra ka maharary dia mety ho lasa fahatsapana mandany fotoana be dia be, ka izay no maha-zava-dehibe ny fanohizana fikarakarana tena - ary ny fahatsiarovan-tena no fomba tonga lafatra anaovana azy.
tsy liana amiko izy
Andramo ny yoga, na ny fandroana feo mandeha mandritra ny dia lavitra na dia ny fiasan'ny hatsembohana amin'ny gym aza dia mety ho endrika fahatsiarovan-tena.
Mikendry zavatra iray izay tokony hifantohanao izay manampy amin'ny fampitoniana ireo eritreritra hafa ao an-tsainao.
5. Mijanona ho be atao foana.
Indraindray, mila fanelingelenana tsara ianao!
Raha olona taloha ny olona malahelo anao, dia mety ho variana be amin'ny fisarahana ianao ka ny karazana sisa tavela amin'ny fiainanao dia mitambatra amin'ny fotoam-pivoriana lehibe mitomany.
Ara-dalàna tanteraka izany, ary mahasalama ny manodina ny fihetsem-ponao ary miresaka momba izany - amin'ny lafiny iray.
Raha manjary tsy zaka ny tsy fananan'izy ireo dia mila mitady zavatra hafa ianao hampazoto ny sainao.
Jereo ny namana, mandehana mihazakazaka, mitsidika tranombakoka - na ny mijery sarimihetsika mahatsikaiky aza (fa tsy rom-com) dia afaka mitazona ny sainao hiala amin'ireo eritreritra ratsy sy mandany rehetra ireo.
Ireo eritreritra ireo dia mbola hipoitra ihany, mazava ho azy, saingy hiharatsy sy tsy hiverimberina izy ireo.
6. Mizarà ireo fahatsiarovanao.
Raha malahelo olon-tiana very ianao dia mety hahatsapa ho toy ny hoe tsy hitsahatra ny fanaintainana.
Tsy misy ny safidy ‘hiverenana miaraka’ na ny hidona amin'izy ireo indray, ary mety ho sarotra tokoa ny manamboatra azy io, avelao ihany ny hanaiky.
Ny zavatra iray azonao atao, izay hitan'ny olona maro fa manampy, dia ny miresaka momba azy ireo.
Tsy voatery ho amin'ny fahatratraranao ny alahelo azy ireo sy ny mahatsiravina ny fatiantoka, fa amin'ny resaka fizarana fahatsiarovana mahafinaritra sy fankalazana ny fiainany ary ny fitiavanao azy ireo.
Ataovy amin'ny olona tianao sy atokisanao izany, na inona na inona hahafantarany na tsia ilay olona misaona anao.
Arakaraka ny ahazoanao aina kokoa, ny marina kokoa sy marefo kokoa dia hamela anao hanao izany. Hanampy anao amin'ny fikirakirana ny fihetseham-ponao izany (saika endrika 'fitsaboana miresaka') ary hamela anao ho maivana kely ihany koa isaky ny mandeha.
Rehefa very olona iray isika dia matetika no manahy sao hanadino zavatra momba azy ireo isika. Mety ho toa tsy ho vita izany amin'ny voalohany, saingy mety hisy andro iray hifohazanao ary hahatsapanao fa tsy tadidinao Izay indrindra tahaka ny ahoana ny fihomehezan'izy ireo, na mety ho tsapanao tampoka fa tsy nieritreritra azy ireo ianao tontolo andro.
Izany dia mety hiteraka fahatsapana ho meloka sy henatra - saingy tsy tokony. Ara-dalàna sy ara-pahasalamana ny fahazoana sehatra izay tsy hieritreretanao olona momba azy, ary tena tanteraka izany tsy taratry ny fahatsapanao azy ireo.
Tsy mila tadidinao ny tena lokon'ny mason'ny olona iray vao hahalala fa mikarakara azy ianao, ary tsy tokony hahatsapa ho ratsy na meloka ianao na toy ny hoe tsy malahelo 'ara-dalàna' ianao satria tsy mitomany azy ireo isan'andro .
Amin'ny fizarana ny fahatsiarovanao amin'ny olona iray dia manampy anao hihazona ireo fahatsiarovana ireo ho velona ihany koa ianao. Hanana olon-kafa afaka manampy anao hitadidy ireo zavatra mety hadinonao ianao, ary afaka hizara ny hamafin'ny fahatsapanao amin'ny toerana azo antoka ianao.
Mety ho sarotra ny miresaka momba azy ireo ary mety ho manta loatra amin'ny voalohany, fa arakaraky ny isokafanao no hahamora azy io ary tsy dia hanaintaina intsony izy rehefa mandeha ny fotoana.
Tadidio fa tsy maninona ny mizara fahatsiarovana ratsy koa! Azonao atao ny mitia olona iray ary malahelo azy mafy dia maharary - saingy mety mbola nahatezitra anao ihany izy ireo tamin'ny fahavelony!
Ny fitiavana olona iray dia tena tia azy rehetra, ka izay no antony maha ara-dalàna tanteraka ary tsy maninona ny mitabataba amin'ny fotoana mahasosotra anao, na mitomany ny fomba nandratra anao tamin'ny fotoana iray.
Tsy mila mahatadidy azy ireo ianao amin'ny maha olo-masina azy hanaja ny fiainany - azonao atao ny mahatadidy azy ireo amin'ny maha-olombelona mahafinaritra azy, miaraka amin'ny lesoka sy ny lafiny ratsy rehetra, ary mbola tia azy ireo mihoatra ny zava-drehetra.
7. Makà fanidiana.
Ny fanidiana dia sarotra tokoa, ary sarotra ny milaza ny tena dikan'izany amin'ny olona tsirairay.
Ho an'ny maro, indrindra mandritra ny fisarahana, dia ny fahazoana NAHOANA nifarana ny zavatra ary afaka nanao hoe 'veloma.'
Miresaha amin'ilay olona fa tsy eo ianao raha toa izany toe-javatra izany ary, mangataha mangataka fanidiana.
Ho fantatr'izy ireo ny zavatra tadiavinao ary, matetika, dia homeny anao izany.
Raha tsy manao izany izy ireo, izay ara-drariny ary ao anatin'ny zon'izy ireo, dia mety hiasa ho toy ny karazana fanidiana izany. Ekeo fa toy izany ny toe-javatra ary manidy varavarana - ho soa.
manao sonia lehilahy te hiara-matory aminao
Lahatsoratra mifandraika: Torohevitra 11 hialana amin'ny fifandraisana tsy misy fanidiana
8. Makà fanampiana matihanina.
Mazava ho azy, raha tena sahirana ianao miatrika ny hamafin'ny fahatsapanao, ny fikatsahana fanampiana matihanina dia mety ho sarobidy tokoa.
Na olona ao amin'ny fianakaviana, na namana, na olona taloha tsy tadidinao, dia afaka manampy anao ny mpanolotsaina voaofana iray.
Na dia mahatsapa ianao fa 'tsy ratsy' toy ny olon-kafa ny toe-javatra (ohatra: tsy miresaka aminao ny namanao akaiky indrindra, dia mahatsiaro ho meloka ianao raha mahazo fanampiana rehefa maty ny olon-tiana hafa), raha be izany ny fiatraikany amin'ny fiainanao andavanandro sy ny fiainanao tsara dia tokony hoheverinao ny mahazo fanampiana.
Mieritreritra ve ianao fa mila fanampiana bebe kokoa hanakanana ny tsy fahitana namana taloha? iSIKA tena fahazoan-dàlana hiresaka an-tserasera amin'ny manam-pahaizana momba ny fifandraisana avy amin'ny Relationship Hero izay afaka manampy anao hamantatra. Tsotra.
Antony 7 Maninona ianao no mieritreritra ny momba ny taloha (+ Ahoana no hijanonana)
Raha namela anao vehivavy hafa ny vadinao, vakio ity
Ahoana no fomba hifandraisana indray amin'ny sakaiza taloha izay mbola tsy hitanao hatry ny ela
Fa maninona no mandratra be ny fisarahana? Ny fanaintainan'ny fifarana eo amin'ny fifandraisana.
ampio aho hiaraka hiatrika ny fiainako
avelan'ny vadiko ho an'ny vehivavy hafa ve aho?
manaraha lahatsoratra aorian'ny daty voalohany
maninona isika no misaraka sy miverina miaraka
hanorina indray ny fomba fifandraisana akaiky amin'ny fifandraisana
hetsika mahafinaritra hatao ao an-trano rehefa mankaleo
rehefa tsy manaja lehilahy ny vehivavy